Wheelchair Professionals - Kutengesa uye mahunyanzvi
Chii chiri wiricheya nyanzvi? Kwandiri, a wiricheya pro mumwe munhu ane ruzivo rwakaomarara rwemanyore uye magetsi mavhiripu; ivo zvakare vangangove vane ruzivo rwekugadzirisa iyo wiricheya indasitiri zvakananga.
vamwe wiricheya zvayakanakira zvakadzidziswa chaizvo kune imwe mhando ye wiricheya. Mumwe munhu akaita seAubatsira Tekinoroji Nyanzvi (ATP) ane ruzivo uye ruzivo maererano nekugadzirisa chete wiricheya. Zvinoreva kuti ivo vakadzidziswa kuve vanobatsira uye vakagadzirira zvakakwana kuyera murwere, kutsvaga kuti ndezvipi zvavanoda zuva nezuva, uye kuongorora mhando yemamiriro ekubhadharisa ari kuvharwa izvozvi.
Imwe mhando ye wiricheya nyanzvi inyanzvi pachigaro. Panzvimbo pekugona pamhando imwe ye wiricheya kana imwe wiricheya maitiro, iyo general technician inogona kuona nyaya nechero mhando ye wiricheya, uye vangangove vane ruzivo rwekugona kugadzirisa chero mhando ye wiricheya.
vamwe wiricheya Pros anozivikanwa kunzi akadaro, vamwe vanga vari mukati nekukomberedza indasitiri kwenguva yakareba zvakakwana kuti vabvumirwe kubvuma vezera ravo nevarwere. Zvichireva kuti vanga varipo kwenguva yakareba, zvekuti vanofungidzirwa wiricheya nyanzvi zvichibva pane zvakaitika kwavari.
Kune mhando dzakawanda wiricheya zvayakanakira zvakapoteredza indasitiri. Imwe inouya mupfungwa ndeye wiricheya mutengesi. Mumwe munhu anogona kupa musanganiswa wakakodzera wezvinhu uye zvinongedzo zvemushandisi anogona kubata chinzvimbo ichi.
Ivo vanogona kupindura yakanyanya mibvunzo, uye mimwe mibvunzo yepamberi iyo imwe mhando yenyanzvi isingazive. Vamwe vane pfungwa yekuti a wiricheya mutengesi anopesana nezita racho, nekuti basa ravo nderekutengesa iwe zvakanyanya ivo zvavanogona, nepo zvisiri hazvo kuva nefariro yako yakanaka mupfungwa.